नेपाल आज | मदन भण्डारीमाथि भारतको लगानी (प्रमाणसहित)
मदन भण्डारीमाथि भारतको लगानी (प्रमाणसहित)
तत्कालीन नेकपा एमाले देशकै सबैभन्दा संगठित र धनी पार्टी हो । यो पार्टीका सबैभन्दा प्रिय नेता हुन् मदन भण्डारी । जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवत्तककारुपमा मदन एमालेका पथप्रर्दशक हुन् । तर, केही वर्ष अगाडी यिनै नेताका नाममा भारतीय दुतावासबाट धमाधम लगानी भइरहेको थियो । लगानी कति भयो ? प्रष्टाइएको छैन । तर करोडौं भइसकेको नेकपाभित्रै चर्चा छ । मदनको नाममा एमालेका भिन्दाभिन्दै एनजिओ छन् । मदन भण्डारी फाउण्डेशन, मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र, मदनआश्रित फाउण्डेसन मुख्य तीनवटा एनजिओ हुन् ।
मदन भण्डारी फाउण्डेशन नामको एनजिओ केपी ओली एमालेको अध्यक्ष नभइन्जेल पार्टीको समानान्तर कमिटिजस्तो थियो । राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपुर्व फाउण्डेशनको अध्यक्ष थिइन् विद्यादेबी भण्डारी । ओली गुटका सबैजसो रणनीति गौशलास्थित फाउण्डेशनको कार्यालयमा हुन्थ्यो । मदन भण्डारीको नाममा रहेको यो फाउण्डेशनमा विद्यादेबी भण्डारीको कार्यकालमा मात्र करोडौं रुपैया भारतीय दुतावासले लगानी गरेको बताइन्छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचित भएसंगै उनले फाउण्डेशनको अध्यक्षमा आफ्नी जेठी छोरी उषाकिरण भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी हुन् । अहिले फाउण्डेशनलाई चीनले समेत राम्रै लगानी गरेको बताइन्छ । फाउण्डेशनका जिल्ला समितिहरु समेत छन् । ओली पक्षधर नेताहरु फाउण्डेशनको जिल्ला नेतृत्वमा छन् । उनीहरुको जिविकोपार्जन समेत हुनेगरी फाउण्डेशनले जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल पक्षधरले फाउण्डेशनमा अवैधरुपमा लगानी भएको तथा अपारदशीरुपमा धनराशी संकलन गरेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै विरोध गर्दैआएको छ ।
जननेताका रुपमा परिचित भण्डारीको नाममा खोलिएको र उनकै परिवारले नेतृत्व गरेको फाउण्डेशनले कहांबाट कति रकम लिएको छ भन्ने अहिलेसम्म खुलाइएको छैन । मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई टक्कर दिन पार्टी सचिव योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र नामको एनजिओ खोलियो । मदन भण्डारी साझा र निष्कलंक नेता भएपनि उनको नाममा बंशबाद र विदेशी धनको रजांइ गर्न खोजिएकाले मदन भण्डारीको विचारको प्रवाहका लागि अध्ययन केन्द्र खोल्नु परेको भट्टराई पक्षको प्रष्टिकरण छ । अर्को यस्तै फाउण्डेशन छः मदनआश्रित फाउण्डेशन । यो फाउण्डेशनको नेतृत्व गरेका छन् प्रदिप नेपालले ।
नेपाल नेतृत्वको फाउण्डेशनले भारतीय दुतावासबाट लुकेर होइन, खुलेरै सहयोग लिने गरेको छ । जेठ तीन गते भारतीय दुतावासको तीन करोड भन्दा बढी लगानीमा काठमाडौंको गोठाटारमा बनेको फाउण्डेशनको छात्रवासको उद्घाटन नेता नेपाल र भारतीय राजदुत रंञ्जित रायले सयुंक्तरुपमा गरेका थिए । मदनआश्रितका नाममा राज्यले पनि कार्यक्रम ल्याएकै छ । यसपालीको बजेटमा पनि मदन भण्डारीका नाममा ठूलै योजना परेका छन् ।
तत्कालीन भारतीय राजदूत रंजीत रे र मदन आश्रीत फाउन्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप नेपालले गोठाटारमा मदन आश्रीत मेमोरियल टेक्निकल स्कूलको लागि होस्टल भवनको उद्घाटन गर्दै।
पार्टीपंक्तिभित्रैबाट मदनका नाममा अरबौं उठाउन सक्ने क्षमता एमालेको छ । तर, मदनको नाममा दुतावासबाट पैसा किन कुम्लाइदैछ ? प्रश्न पेचिलो तर अनुत्तरित छ ।